Football Khabar » घरेलु मैदानमा फिनल्यान्डसँग फ्रान्सको लज्जास्पद हार !
घरेलु मैदानमा फिनल्यान्डसँग फ्रान्सको लज्जास्पद हार !
सन् २०१८ को विश्वच्याम्पियन फ्रान्सले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा लज्जास्पद हार भोगेको छ । नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान भएको खेलमा फ्रान्सले आफ्नै घरेलु मैदानमा पाहुना टोली फिनल्यान्डसँग ०–२ को नमिठो हार भोगेको हो । पहिलो र दोस्रो हाफमा गरेर फ्रान्सले सबैजसो प्रमुख खेलाडी उतारे पनि आफ्नै घरमा कमजोर टोलीसँग अप्रत्यासित हार टार्न सकेन ।
पाहुना टोेली फिनल्यान्डले दुवै गोल पहिलो हाफमा ४ मिनेटको बीचमा गरेको थियो । पहिलो गोल खेलको २८औं मिनेटमा मार्कुस फोर्सले गरेका थिए । त्यसपछि केहीबेरमै ३१औं मिनेटमा दोस्रो गोल ओनी भालाकारीले गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २७ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०३:५०